Izinto ezi-4 Okufanele Ube Nazo Kuzo Zonke Izinto Zokuqukethwe Martech Zone
Omunye wabafundi bethu ocwaninga nokusibhalela ucwaningo lokuqala wayebuza ukuthi ngabe nginayo yini imibono yokuthi ungalukhulisa kanjani lolo cwaningo ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kuhanjiswe kahle futhi kuyaphoqa. Ngenyanga edlule, besenza ucwaningo nayo U-Amy Woodall ekuziphatheni kwezivakashi okusiza ngalo mbuzo.
U-Amy ungumqeqeshi wokuthengisa onolwazi futhi isikhulumi somphakathi. Usebenza ngokuseduze namaqembu ezentengiso ekubasizeni ukuthi babone izinkomba zenhloso nogqozi olutholwa ochwepheshe bokuthengisa futhi basebenzise ukuhambisa isinqumo sokuthenga phambili. Elinye lamaphutha esivame ukuwenza ngokuqukethwe kwethu ukuthi likhombisa umbhali wokuqukethwe kunokuba likhulume nomthengi.
Izithameli zakho zikhuthazwa yizinto ezi-4
Ukuphumelela - Lokhu kuzowenza kanjani umsebenzi wami noma impilo ibe lula?
Emotion - Lokhu kuzowenza kanjani umsebenzi wami noma impilo yami ijabule?
Trust - Ngubani otusa lokhu, esebenzisa lokhu, futhi kungani kubalulekile noma kunethonya?
amaqiniso - Yiluphi ucwaningo noma imiphumela evela emithonjeni ehloniphekile ekuqinisekisayo?
Lokhu akubhalisiwe ngokubaluleka, futhi abafundi bakho abangeni entweni eyodwa noma kwenye. Zonke izinto zibaluleke kakhulu kokuqukethwe okulinganiselayo. Ungabhala ugxile kokukodwa noma kokumbili, kepha konke kubalulekile. Kungakhathalekile ukuthi uyini umkhakha wakho noma isihloko sakho somsebenzi, izivakashi zithonywe ngokuhlukile ngokuya ngobuntu bazo.
Ngokuvumelana ne EMarketer, amaqhinga wokuthengisa wokuqukethwe we-B2B asebenza kakhulu yimicimbi eyenziwa ngabantu (ekhonjwe ngabathengisi abangama-69%), ama-webinars / ama-webcasts (64%), ividiyo (60%), nama-blogs (60%). Njengoba umba ujule kulezo zibalo, okufanele ubone ukuthi amasu asebenza kahle kakhulu lapho zonke izinto ze-4 zingasetshenziswa ngokugcwele.
Emhlanganweni womuntu uqobo, ngokwesibonelo, uyakwazi ukubona izingqinamba izithameli noma ithemba lakho eligxile kuzo futhi uzinikeze zona. Bangase bangene kwamanye ama-brand owasebenzisayo. Okwe-ejensi yethu, njengesibonelo, amanye amathemba ayabona ukuthi sisebenze nemikhiqizo emikhulu efana neGoDaddy noma Uhlu luka-Angie futhi okusisiza ukuthi singene shí ekuzibandakanyeni. Ngokuthola amanye amathemba, bafuna izifundo zamacala namaqiniso ukusekela isinqumo sabo sokuthenga. Uma simi lapho, singakhiqiza okuqukethwe okulungile phambi kwabo.
Akumangazi ukuthi lokhu kuyimakethe ekhulayo. Izinkampani ezifana neklayenti lethu I-FatStax nikela ngohlelo lokusebenza lweselula oluqhutshwa yidatha olusebenzisa i-smartphone noma ithebhulethi ebeka konke okuqukethwe kwakho kokumaketha, isibambiso sokuthengisa, noma idatha eyinkimbinkimbi ofisa ukuyihlanganyela entendeni yesandla sakho (ungaxhunyiwe ku-inthanethi) ukunikeza ithemba lakho ngesikhathi abasidingayo it. Ukungasho ukuthi umsebenzi ungarekhodwa ngokuhlanganiswa komuntu wesithathu.
Esiqeshini esimile sokuqukethwe, njengesethulo, i-athikili, i-infographic, iphepha elimhlophe noma isifundo samacala, awunakho ukunethezeka kokuxhumana nokukhomba izizathu ezisiza ukuguqula abafundi bakho. Futhi abafundi abakhuthazwa yinoma iyiphi into eyodwa - badinga ibhalansi yolwazi kuzinto ezi-4 ukusiza ukubakhuthaza ukuthi bazibandakanye.
Tags: okuqukethwe okuphoqayoUkukhangisa OkuqukethweUkuguqulwaUkuphumelelaIzakhiimizweloamaqinisomzwandileukwethembaKubhalaizindatshana zokubhala